सार्वजनिक रुपमा कमै देखिने अक्षयका छोराको सुन्दरतामा कयौं युवती कायल – AB Sansar
सार्वजनिक रुपमा कमै देखिने अक्षयका छोराको सुन्दरतामा कयौं युवती कायल
मनोरञ्जन रोचक विश्व प्रवास
September 16, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on सार्वजनिक रुपमा कमै देखिने अक्षयका छोराको सुन्दरतामा कयौं युवती कायल
अक्षय कुमारका छोरा आरव भाटिया १९ वर्ष पुगेका छन् । आरव लाइमलाइटबाट टाढा नै बस्छन् तर आफ्नो ड्यासिङ लुकका कारण उनले आफ्ना लागि उल्लेख्य फ्यानबेस खडा गरेका छन् । आरवका तस्बिर सोसल मिडियामा छाइरहन्छन् ।
हुन त आरवलाई सार्वजनिक रुपमा कमै देखिन्छ । तर जब उनी पापाराजीको क्यामरामा कैद हुन्छन्, तब ती जताततै छाउँछन् । आरवको पार्टीका तस्बिर होस् वा क्यान्डिड तस्बिर, उनको ह्यान्डसम र चार्मिङ लुक्समा युवतीहरु फिदा हुन्छन् ।
आरवको एउटा तस्बिर जुन सबैभन्दा बढी भाइरल भएको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको कान तानिरहेको देखिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आरवलाई गुड बोय भनेका थिए । यो तस्बिर सन् २०१६ को हो जब मोदी इन्टरनेशनल फ्लिट रिभ्यूमा उपस्थित भएका थिए । त्यहाँ आरव पनि सरिक भएका थिए ।
आरव आफ्ना पिताजस्तै ह्यान्डसम छन् । उनको लुक्स धेरथोर उनका पिता अक्षयसँग मेल खान्छ । पिता र छोराबीच उत्कृष्ट बन्ड छ ।
आरव आफ्नी आमाको निकै नजिक छन् । ट्वीङ्कल खन्ना सोसल मिडियामा छोराको जीवनसँग जोडिएका अपडेट्स सेयर गरिरहन्छिन् । आरवलाई आफ्नो पितालाई झैं पकाउन निकै शौक छ । आरवको सेन्स अफ ह्युमर पनि निकै राम्रो छ ।
आरव पार्टीमा पनि निकै रमाउँछन् । सैफ अली खान र अमृता सिंहका छोरा इब्राहिम अली खानसँग आरव धेरैजसो पार्टी गरिरहन्छन् । यी दुई निकै मिल्ने साथी हुन् । आरव र इब्राहिमलाई थुप्रै पटक सँगै देखिएको छ । आरवलाई खेलकुदमा पनि निकै शौख छ ।
आरवको बलिउडमा प्रवेशको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी गरिन्छन् । छोराको बलिउडमा आउन सक्ने सम्भावना बारे अक्षयले भनेका थिए – मेरो छोरा निकै फरक छ । ऊ मेरो छोरा हो भनेर कसैलाई पनि बताउन चाहँदैन । उनी लाइमलाइटबाट टाढा नै बस्न चाहन्छ । ऊ आफ्नो पहिचान आफैं स्थापित गर्न चाहन्छ । म उसलाई उसको आफ्नै तरिकाले बस्न दिन्छु । मेरा पिता मेरो जीवनको प्रेरणा हुन् । मैले उनको सबै नियम पालना गरेँ जुन उनले मलाई सिकाए । आशा गर्छु, आरवले पनि त्यो सब पाउनेछन् ।
आरव निकै क्षमतावान छन् । उनी आफ्ना पिताजस्तै मार्शल आर्टस्मा ट्रेन्ड छन् । आरवसँग ब्राउन बेल्ट छ । उनले जूडो नेशनल च्याम्पियनशिपमा गोल्ड मेडल जितेका छन् ।
आरवको चार्मिङ पर्सनालिटी र गुड लुक्स धेरैजसो चर्चामा छाइरहन्छ । आरवको नाममा इन्स्टामा थुप्रै फ्यानक्लब बनेका छन् जहाँ आरवका क्यान्डिड तस्बिर र सेल्फी भाइरल भइरहन्छन् ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा परिवार सहित बस्दै आएका ३९ वर्षिय उपेन्द्रको निधन, पत्नि र २ नाबालक छोरा बेसहारा बने
९ महिनाकी गर्भवती भनिएकी महिलाको पेटमा कुकुर बच्चा भेटेपछि डाक्टर समेत चकित
म्यानमारको सैन्य ‘कू’को काठमाडौंमा विरोध
February 1, 2021 Ab-संसार
के तपाईं पनि दैनिक रुपमा अण्डा खानु हुन्छ ? एकपटक यो अवश्य पढ्नुस !
चर्चित टेलिभिजन सिरियल ‘बालिका वधु’की अभिनेत्री सुरेखाको निधन
July 16, 2021 Ab-संसार
ए’सिडले ज’लेकी संगिताको गासियो लगनगाठो । October 17, 2021
फुपूको घरमा बस्दै आएका १३ बर्षिय प्रकाश भण्डारीको करेन्ट लागेर मृ,त्यु October 17, 2021
पैसाको अभाबले गर्भवती महिलाको लास हस्पिटलमै October 17, 2021
श्रीमानले लात्तीले हा’ने पछि पिँडीवाट आँगनमा झरेकी कान्छीमायाको मृत्यु October 17, 2021
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको नि/धन ?? October 17, 2021